ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကိုချစ်ကစားသမားတွေအကြောင်းပုံပြင်တွေပေါ်အကြောင်းကြားပရိတ်သတ်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဘောလုံးသမားများကလေးဘဝပုံပြင်များပါစေ။ LifeBogger ယနေ့အထိသူတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကြိမ်မှရည်ညွှန်းနှင့်အတူဘောလုံးကြယ်ပွအကြောင်းကိုအရှိဆုံး, ချုပ်ကိုင်အံ့သြစရာများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံပြင်များဖမ်းယူ။ ငါတို့အဘယျသို့တကား!
ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောလူ့တစ်ဦးကလေးဘဝပုံပြင်နှင့်ဘောလုံးကစားသမားဂြိုလ်သားဂြိုလ်ကနေမဟုတ်သိရသည်။ သူတို့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့အဘိဥာဏ်အစွမ်းအနှင့်အတူ mutants ကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ကဘိုးဘေးတို့မွကွေီးမှမိမိတို့၏မျိုးနွယ်ခြေရာကောက်နိုင်သူ In-တကယ်တော့လူသားမြားသဖြစ်ကြသည်။
Lifebogger ဘောလုံးကစားသမားများ, မန်နေဂျာနဲ့အထက်တန်းလွှာများမှတ်သားလောက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖြစ်ရပ်များအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ LR မှ: ဗန် Dijk, လောနိတျမွို့မိုဒရစ်, Kylian Mbappe, Zinedine ဇီဒန်း နှင့် အလက်ဇန္ဒား Ceferin။ Image ကို Credit: LB.
At Lifebogger, ကျွန်တော်တို့ဟာဘောလုံးကစားသမားများ, မန်နေဂျာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအထက်တန်းလွှာနှင့် ပတ်သက်. တင်ပြသောစိတ်ဝင်စားဖို့အတ္ထုပ္ပတ္တိများ၏အရေးကြီးသောမဲဆန္ဒနယ်မှနေသောထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းဘဝပုံပြင်များကိုဖမ်းယူ။
ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မြတ်သောရေးရာနောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်းများ, အစောပိုင်းဘဝဝဒေနာစိတ်ကိုဆောင်သော, ဘောလုံး၏ဂိမ်းတိုးတက်အောင်ဆီသို့ဦးတည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲတမ်းအထောက်အကူပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးအမြတ်အဖြစ်ဘောလုံးကစားသမားများ, မန်နေဂျာနဲ့အထက်တန်းလွှာများ vicissitudes မသာအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးသင်ခန်းစာအချို့ကိုပေးလိမ့်မယ် ပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခရီးထွက်စတင်သူတို့အားအကျိုးစီးပွားဘဝပေမယ့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အတ္ထုပ္ပတ္တိသို့မဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ဘောလုံးပုံပြင်များသည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အငယ်ရွယ်ဘောလုံးနိူးဖို့အရေးကြီးလှသည်။ Image ကို Credit: GhHeadlines ။
အကျဉ်းနည်း, ဤဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ပီသသောတိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကောင်းစွာပဋိသန္ဓေ ယူ. ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘောလုံးကစားသမားများ, မန်နေဂျာနဲ့အထက်တန်းလွှာများ၏အစောပိုင်းဘဝဖြစ်ရပ်များတင်ပြခြင်းဖြင့်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတစ်ဦးပြည့်စုံစိတ်ကူးပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - ညံ့ဖျင်းသောမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့အဘယ်သူသည်ဘောလုံးကစားသမားများနှင့် Elite
တချို့ကဘောလုံး geniuses နှင့်အထက်တန်းလွှာအချို့ဘာမျှအမွေဆက်ခံ, ဆင်းရဲသောမွေးဖွားခဲ့ပြီး, အခြားသူများကိုဆင်းရဲမွဲတေမှု၏ဒဏ်လက်မှမှမိမိတို့ untangle ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်များစောင်းဘယ်ဟာကိုလမ်း, ဆင်းရဲမွဲတေမှုအမှန်ပင်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာပုံပြင်များစညျးစိမျမှနာမည်ကြီးအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းမှဦးဆောင်မယ့်လှုံ့ဆျောမှုအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ uncharitable နှင့်ကြောက်7အက္ခရာစကားလုံးများ၏အသက်နှင့်မြင့်တက်နှင့်အတူသတ်မှတ်ဖေါ်ပြ စီရော်နယ်ဒိုအကောင်းဆုံးအတွက်နှုတ်ဆောင်ခဲ့ ဆွာရက်ဇ်ဒါကြောင့်အထက်တန်းလွှာနှမြောလုပ်ခဲ့တယ်မ; Roman Abramovich တို့ နှင့် Gianni Infantino ဒါပေမယ့်လုပ် ဂါဗြေလကယေရှုရဲ့ ဘရာဇီးအတွက်နွဲ့လေးတွေသန်းပေါင်းများစွာတို့အတွက်လှုံ့ဆျောမှုကျော်ကြားမှုမှထမြောက်။
ဆငျးရဲဒုက်ခပေမယ့်ပြုံး, ရော်နယ်ဒို, ဆွာရက်ဇ်, Gianni Infantino နှင့်ဂါဗြေလညျယရှေုအစောပိုင်းဘဝတွေကိုရုန်းကန်နေခဲ့ရသည်။ Image ကို Credit: LB.
ဆင်းရဲမွဲတေမှုကဤဘောလုံးသမားများအတွက်ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ခြင်းကြားမှတစ်အစွမ်းထက်စေ့ဆော်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာ, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၏ဂိမ်းသူတို့ဘဏ္ဍာရေးခွအေနမြေားကိုတိုးတက်စေရန်တို့အတွက်ယာဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - ဘောလုံးကစားသမားများနှင့် Elite Rich မွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့အဘယ်သူသည်
တစ်ဖက်တွင်, ဘောလုံး geniuses နှင့်အထက်တန်းလွှာများ၏အရေအတွက်, စိန် pacifiers ငွေဇွန်းနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူအချို့သောအကြီးမွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့ဘဝကြီးကိုစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဝေးဆင်းရဲမွဲတေမှုမာဂျင်အထက်နေထိုင်ခဲ့တယ်။
၏အကြိုက် အလက်ဇန္ဒား Caferin နှင့် မိုက်ကယ် Platini အစောပိုင်းသူတို့နှင့်တူဘောလုံးကစားသမားတစ်ဦးအိမ်ရှင်အနေဖြင့်အကြီးအဘဝတွေကိုအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမှုတပ်ဆင်ထားခဲ့သည် မာရီယို Gotze, Andrea Pirlo နှင့် Gerard Pique ဥစ္စာဓနမရှိသူစိမ်းကျော်ကြားမှုရရှိရှေ့မှာဖြစ်ဘူး။
မာရီယို Gotze, Gerard Pique နှင့် Andrea Pirlo ချမ်းသာကြွယ်ဝမိသားစုများသို့မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ Image ကို Credit: LB.
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - ကလေးများအဖြစ်စစ်ပွဲနှင့်အဓိကရုဏ်းလွတ်မြောက်သူကားအဘယ်သူဘောလုံးကစားသမား
နိုင်ဂျီးရီးယားမွေးဖွား၏အစောပိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းသို့တစ်ဦးကကြည့် ဗစ်တာမောရှေသည် မမြောက်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်အဓိကရုဏ်းများအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုများဘူးပြောထားသည် Juan Cuadrado နှင့် Serge Aurier အသီးသီး Necocli နှင့်အိုင်ဗရီကို့စ်၏ကိုလံဘီယာမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မှုပျော်ရွှင်အမှတ်ရစရာရှိသည်။
Juan Cuadrado ကလေးဘဝကာလအတွင်းစစ်ပွဲများနှင့်အဓိကရုဏ်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ကြောင်းအနည်းငယ်ဘောလုံးကစားသမားအကြားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Image ကို Credit: LB.
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်တာရှည်သေပြီပါပြီမညျ့သူဘောလုံးကစားသမား
သူကဘောလုံး၏ဂိမ်းအကြောင်းကိုသိရန်ရတယ် Long ကမီ, ဒီယေဂိုကော်စတာနီးပါးမိမိအသက်သွားကြောင်းဖွဲ့သောမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့သညျ။
တစ်ဦးကကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ရပ်ကော်စတာရုံခြောက်လနှစ်အရွယ်မှာထိုအချိန်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူဟင်းလျာများဆေးကြောဖို့သှားသောကသူ၏မိခင်အားဖြင့်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ Little ကကော်စတာကသူ့ကိုနောက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းမြွေရှိခဲ့သည်ကိုမသိမကသူ့အိပ်ခန်းထဲမှာမွေ့ရာပေါ်မှာအိပ်ပျော်။ မိမိအမိကိုကော်စတာရဲ့အိပ်ရာမှမီးဖိုချောင်မှပြန်လာသောအခါသူမသည်သူမ၏ကလေးငယ်ကိုချဉ်းကပ်တစ်ဦးအဆိပ်အပြင်းမြွေကိုမြင်တော်မူ၏။
Josileide da Silva ကော်စတာကတိပ်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းခဲ့ကြောင်းထင်ခဲ့ပေမယ့်သူမတစ်ဦးတိပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဤအရာဝတ္ထုသူမ၏ကလေးသည်ဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တစ်ဦးအမြန်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူသူမအလျင်အမြန်မိမိအသက်ကိုချွေတာကြောင့်အဆိပ်အပြင်းမြွေကိုက်ရာမှသူ့ကိုရှောင်ရှားရန်ကော့ရဲ့လက်ကိုဆွဲ။
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - ဘယ်သူ့အဘတို့အဆိုပါအားကစား၏ Legends ရှိခဲ့ဘောလုံးကစားသမား
အဘယ်သူမျှမ mentorship အဆိုပါလမ်းညွှန်သည့် mentees မရှိအခြားလူများပေမယ့်ဇီဝဗေဒသည်ဘိုးဘေးတို့ဖြစ်ကြသည်အထူးသဖြင့်လာသောအခါမိမိတို့ကိုယ်အတွင်းရှိမျှော်လင့်ချက်ကြည့်ဖို့ aspiring ဘောလုံးကစားသမားကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းပယ်ရှိပါတယ်။
ဖခင်နဲ့တူထပ်မံclichéမရှိရင်သားကဲ့သို့ငါတို့သည် Thiago Alcantara အဘယ်သူသည်မိမိအဘ Mazinho ပြီးနောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ အခြားသူများကပါဝင်သည် ရှောလုသည် Niguez သူ့ဖခင်အန်တိုနီယို၏လမ်းကြောင်းနင်းအဖြစ်သူကို ဆာဂျီယို Busquets မိမိအဖေကားလို့စ်အပြီးလုပ်ပါတယ်ခဲ့သူ။ အမွေအနှစ်ကိုအခြားပုံစံချမ်းသာဖြစ်နိုင်ပါသလား
Thiago Alcantara, ရှောလု Niguez နှင့်ဆာဂျီယို Busquets ဘောလုံးဒဏ္ဍာရီမှသားဖြစ်ကြ၏။ Image ကို Credit: LB.
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - ကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူကဘောလုံးကစားသမား
သူတို့ရဲ့ဘောလုံးအလုပ်အကိုင်များကိုသူတို့ရဲ့လယ်ပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကာလအတွင်းတစ်ဦး Illustrious မြင့်တက်ယူကဲ့သို့အချို့အခြားသူတွေအထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ရမပြုခဲ့စဉ်အနည်းငယ်ဘောလုံး geniuses, ပူးပေါင်းထိုင်နှင့်ဆရာများအနေဖြင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုယူနိုင်ရန်သည်းခံခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။
အဆိုပါဘောလုံးကစားသမားများကဲ့သို့ဒဏ္ဍာရီများပါဝင်သည် Pele, အဖြစ်ဘာစီလိုနာဟောင်းဘရာဇီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားများနှင့်သံအမတ်ကြီး - နယ်။ အနှစ်တစ်ထောင်အသက်အရွယ်ဘောင်အတွင်းကစားသမားဆင်း Moving - အရေးအသား၏အချိန်မှာ - ကျနော်တို့၏အကြိုက်ရှိ စီရော်နယ်ဒို နှင့်ဘာစီလိုနာကြယ်ပွင့် - Lionel Messi အဘယ်သူသည်သမားရိုးကျပညာရေးမပြီးဆုံးခဲ့ပါ။
နယ်, မက်ဆီနှင့် Pele ကလေးဘဝကာလအတွင်းမတည်မငြိမ်ပညာရေးနောက်ခံရှိခဲ့ပါတယ်။ Image ကို Credit: LB.
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - နီးပါး Playing Quit အဘယ်သူသည်ဘောလုံးကစားသမား
ဒါဟာသွားခက်ခဲတဲ့ရရှိသွားတဲ့သောအခါ, ခက်ခဲတဲ့သွားရဟုဆိုသည်။ အဆိုပါအခွခေံမူလူ့ကြိုးပမ်း bar ကိုအဘယ်သူအားမျှဘောလုံးကွင်းများအားလုံးနယ်ပယ်များတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတည်ပြုထားသည်။ တကယ်တော့ဒါဟာကမ္ဘာ့အရှည်လျား၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း buildups စဉ်အတွင်းဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်သူကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားများရတဲ့အပေါ်ထွက်လက်လွတ်မလုပ်ခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးခဲ့တယ်။
များသောသင်သိရ ဝိန်းရွန်နီရဲ့ သူ့ 14 နှစ်အရွယ်ဆိအခါဘောလုံးမေတ္တာစိတ်ကတ်များတစ်ဗူးနဲ့တူဆိတ်ကွယ်ရာလဲကျသွားသည်။ အလားတူပင်အဘယ်သူမျှမစိတျလှုပျရှားစရာတှေရှိခဲ့တယျမယ်လို့ Ibrahimovich ဘောလုံး၏ကမ္ဘာပေါ်မှာသူသင်္ဘောကျင်း၌အသက်ရှိမျက်နှာသာထဲကစကားပြောမခံခဲ့ရပါ။ မိမိအစိတျအပိုငျးတွင်, Alisson Becker ကန့် သူကပင် 15 ၏အသက်အရွယ်မှာနှေးကွေးဇီဝတိုးတက်မှုနှုန်းမှတ်တမ်းတင်ထားရှိမည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘများနီးပါးဘောလုံးထဲကသူ့ကိုဆွဲ။
Young ကဝိန်းရွန်နီနှင့် Ibrahimovich နီးပါးဘောလုံးကစားထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Image ကို Credit: LB.
အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင် - Outfield ကစားသမားအဖြစ် Started အဘယ်သူသည်ဘောလုံးကစားသမား
Dynamics ကိုဖွင့်ရူပဗေဒကျမ်းများတွင်မတွေ့ရှိသည်ကအားကစားအားလုံးရူပဗေဒနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းကြောင်းကိုပေးသောဘောလုံးရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံး၏ပျော်စရာများအတွက်ဘောလုံးကန်ခြင်းဖြင့်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာယူ footballers ရာပထမဦးဆုံးအသိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းနှင့်အတူစတင်သည်။ အဲဒီနောကျသူတို့ကလမ်းပေါ်မှာဘောလုံးအတွက်စေ့စပ်သို့မဟုတ်ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့်ကလပ်အကယ်ဒမီနှင့်အတူလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရ။
ဘောလုံး prodigy မှာနေမြဲနေစဉ်မိမိတို့၏အပြင်းထန်ဆုံးဧရိယာသို့မဟုတ် Fort တည်တတ်၏သည်အထိသူတို့ကွဲပြားခြားနားသောရာထူးများတွင်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့ကဲ့သို့သောသိသာထင်ရှားသည့်အနည်းငယ်စဉ်အချို့တိုက်စစ်မှူးအဖြစ်မိမိတို့၏ကုန်သွယ်မှုရှေ့ပြေးသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ခံစစ်ရာထူးထံမှ ထွက်. လည်သောကြောင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး Thibaut Courtois ကျောတစ်ဦးဖြစ်လာ Full-စုံတဲ့ဂိုးသမားတစ်နောက်ခံလူဖြစ်ခြင်းကနေခြေလှမ်းကျဆင်းခဲ့သည်။ အလားတူပင် ဒါဝိဒ်သည် Gea သူကတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့ရှုထောင့်အတွင်းအိမ်မှာခံစားခဲ့ရသည်အထိတစ်ဦး outfield ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။
သူတို့ဂိုးသမားဖြစ်လာခဲ့သည်မတိုင်မီဒါဝိဒ်သည် Gea နှင့် Thibaut Courtois ကိုပထမဆုံး outfield ကစားသမားအဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြား။ Image ကို Credit: LB.
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘယ်ကြောင့်ကလေးဘဝပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။